Sida loo Kobciyo Bartaada Twitter-ka Kadib | Martech Zone
Sida loo Kobciyo Bartaada Twitter-ka kadib
Talaado, Oktoobar 11, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Waxay u muuqan kartaa wax lagu qoslo nin taas oo ah Twitter soo socda ayaa sii yaraanaya in lagu dhajiyo Macluumaad ku saabsan sida loo kobciyo waxyaabaha soo socda… Laakiin waan sharaxi doonaa.
Bishii ugu dambeysay, waxaan nadiifinayay tobanaan kun oo akoonno aan kala socday Twitter. Waxaan la socday qiyaastii 30k xisaab, laakiin taas waan sifeeyay illaa 5k hoostood oo waan sii wadaa nadiifinta. Markii aan ka takhalusay akoonnada spammy, xisaabaadkaasi way joojiyeen i soo raaca… taas oo keenaysa in raacitaankaygu yaraadaan
Waxaan ku raacay asxaab badan shil waxaanan qabtay murugo ku saabsan. Haddii aan kaa raaco - qoraal uun ii dhig oo dib ayaan ula socon doonaa… wax shaqsi ah ma ahayn. Waxaan si fudud u raacay dadka qaar si shil ah. Sikastaba, dib ugu noqo macluumaadka! Twiends ayaa isku koobtay xaashidan tilmaanta ah sida loo kobciyo bartaada twitter-ka ka soo socda waana qurux iyo waliba mid dhameystiran
Waxa aan ugu jeclahay taladani waa in ay tahay talo adag oo lagu kobcinayo raacitaan ku habboon. Haddii aad ka iibsatid kuwa raacsan meel, waxaad yeelan kartaa lambarro aad u sarreeya, laakiin waxaad ku qulqulaysaa spam. Twitter wuxuu si aad ah uga shaqeynayay koritaanka tiradooda in nidaamka laga rogayo gudaha gudaha iyada oo loo marayo spam. Xaaladda marka la eego waa awood la'aanta tirada dadka aan la raacin. Twitter kuuma oggolaan doono… laakiin wax dhibaato ah kuma qabaan haddaad si guud u raacdo. Taasi waa carrab la '. Haddii Twitter uu ka shaqeyn lahaa tayada waxyaabaha ku jira barxadda isla markaana uu ka saari lahaa kuwa wax jabsada - tayada ayaa hagaageysa dad badana waa ay soo jiidan doonaan barxadda.
Waa tan sida loo sameeyo Kordhi Twitter-kaaga:
Baro Ciyaarta Nice
Haku Dhimin Qiimaha PR
Oktoobar 12, 2011 at 4:20 PM
Had iyo jeer waxaan lahaan jiray wax yar oo badiyaa bartilmaameed u ah Twitter. Laakiin waxaan qabaa in sanadka cusub. Waxaan maalgashan karaa TweetAdder. Kaliya si aan u awoodi karo hawsha waxoogaa yar.
Oktoobar 12, 2011 at 7:39 PM
Waxaan u maleynayaa in TweetAdder uu leeyahay astaamo aad u wanaagsan… laakiin sidoo kale qaar qatar ah. Tusaale ahaan, runtii waxaan jecelahay awoodda wax looga raadsado astaan ​​oo aan u soo dejiyo liisaska la bartilmaameedsaday. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira fursad weyn oo lagu xadgudbo nidaamka haddii aad rabto. Si taxaddar leh ugu gudub oo ha isku dayin inaad ku xadgudubto.
Oktoobar 13, 2011 at 2:01 AM
Waan maqlayaa waxaad leedahay. Taasi waa sababta aan kaliya ugu daro dadka aan raaco iyo kuwa aan raaco gacanta. Waan ogahay in TweetAdder aad si toos ah tan ugu sameyn kartid kuwa kale
waxyaabaha. Laakiin waxaan ka yara taxaddarayaa tan.
Oktoobar 14, 2011 at 10:30 AM
Tani waa shimbir qurux badan 'indhaha indhaha ee ku saabsan waxa la sameeyo iyo wixii aan la samayn. Waad ku mahadsantahay wadaagista.